Tottemham iyo Arsenal oo ku dagaallamaya soo xero gelinta xiddig ka tirsan Man City – Gool FM
(London) 31 Mar 2020. Kooxaha kala ah Arsenal iyo Tottenham Hotspur ayaa u dagaallamaya saxiixa difaaca kooxda Manchester City ee John Stones.
Maadaama horraan Macallin Pep Guardiola uu albaabka u tilmaamay difaaca Ingiriiska, kooxaha London ayaa albaabka usoo garaacaya City si ay kaga qaataan difaaca mustaqbalkiisa uu shakiga badan hareeyay.
Kooxda Etihad ka dhisan ayaa lagu soo warramayaa inay iska iibineyso Stones marka uu suuqa kala iibsiga uu dib u furmo sida Daily Star ay qoreyso.
Si kastaba ha ahaatee, 25-jirkaan ayaa waxaa waqti ciyaareedkiisa cuuryaamiyay dhaawacyo kala duwan oo soo gaaray, waxaana luntay kalsoonidii uu ka heystay tababarahiisa Guardiola, inkastoo horraan laba koob oo horyaalka Premier League ah uu la qaaday .
Kooxaha ku xifaaltama waqooyiga caasimadda Ingiriiska ayaa xiiso badan u muujinaya, waxaana Jose Mourinho uu doonayaa in Stones uu beddel kaga dhigo Jan Vertonghen oo la filayo inuu Spurs ka dhaqaaqo xagaaga maadaama qandaraaskiisa uu dhacayo.
Halka Gunners macallinkeeda Mikel Arteta uu dadaal fara badan ku bixinayo inuu xoojiyo safkiisa difaaca marka suuqa kala iibsiga uu furmo,
Dayton Upamecano ayaa horraan lala xiriiriyay Arsenal bilihii ugu dambeeyay, hase ahaatee loollan adag oo kaga imaanaya Real Madrid iyo qiimihiisa oo sarreeya ayaa ka dhigeysa in kooxda Arteta ay raadiso beddel kale.
Macallinka reer Spain ayaa xiriir wanaagsan la leh Stones maadaama uu macallin-caawiye ka ahaa City, waxaana uu doonayay inuu suuqii January lasoo saxiixdo.
Difaacii hore ee Everton ayaa keliya 10 kulan kusoo bilawday horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan, waxaana sidoo kale uu qalad ku lahaa goolkii Aston Villa ay ka dhalisay Manchester City fiinaalkii Carabao Cup final ee ka dhacay Wembley bishii lasoo dhaafay.